Dhaloota Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
January 13, 2017 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
“Waaqayyo guyyaan hojjete ishee kana, isheettis haa gammadnu” (Faar. 116:24). Guyyaan kun guyyaa fayyinaati; fayyisaan biyya lafaa Kiristoos dhala namaa fayyisuuf dallaa horii keessatti argameerati. Guyyaan kun guyyaa gammachuuti; Qulqulluun Gebri’eel “kunoo uummata hundaaf kan ta’u misiraachoo isinittan himaati hin sodaatiinaa” jechudhaan guyyaa itti dubbate waan ta’eef. Guyyaan kun guyyaa galataati; sababiin isaas namniif ergamootni tokkummaan galata Waaqaaf guyyaa itti dhiyeessan waan ta’eef. Guyyaan kun guyyaa mul’achuu Gooftaati. Waa’ee dhalachuu Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos dursanii raajonniif abbootii hedduun dubbachaafi fakkeenya Isaa hubachaa turani (Uum. 22:18, Kees. 18:15, Dan. 9:25,1Sam. 16:1-13, Faar. 44:10-12, Faar. 10:3, Isa. 7:14, 9:6). Raajiin Raajoota maraa kunoo dhalachuu Gooftaatiin raawwii argateera!
“Bara sanatti Addunyaan hundi akka barreeffamuuf Awugisxoos Qeesaar irraa ajajni bahe. Namni hunduu barreeffamuuf gara magaalaatti bahe. Yooseefis Daawitiif fira waan ta’eef Naazireet Magaalaa Galiilaatii ka’ee Beeteliheem gara jedhamtu magaala Daawitiitti ulfooftee kan turte kaadhimaa isaa Maariyaamii faana barreeffamuudhaaf bahe. Achi osoo jiraniis yeroon da’umsa ishee gahe. Ilma ishee hangafaas deesse. Quba Isaa isa guddaas hiite, huccuus itti marte. Keessummootaaf bakki bultoo waan hin turreef dallaa loonii keessa ciibsite. Harreefi saawwan yeroon isaa qorraa waan turef akka itti hin qorrineef afuura isaanii kennaa dhiyeessaniif. Raajiin “Harreen gooftaa isaa bare, sawwanis dallaa abbaa isaa bare Isiraa’eel garuu Gooftaa isaa baruu hin dandeenye” jedhame ni raawwate (Isa.1:3).
Gooftaan Beeteliheemitti maaliif dhalate?
Beeteliheemiif raajiin dubbatame waan tureef gooftaan Beeteliheemitti dhalate. Raajichi Miikiyaas bakka biraa barsiisaa oolee gara dhihaa karaa balbala Beeteliheem darbaa osoo jiruu Beeteliheem diigamtee, caccabdee, muujjaan irratti biqilee waan argeef gadduudhaan akka fayyisaan (Gooftaan) ishee keessatti dhalatu dubbateef (Miik.5:2).
Moototni baha fagoo akkamitti dhagahanii kennaa fidanii dhufani?
Abbaan ogeessota kanaa beekaa falaasmaati. Guyyaa tokko qarqara lagaa taa’ee hojii falaasamaa isaa hojjechaa osoo jiruu ol samii gaafa ilaalu urjii irratti dubreen ilmashee hammattee fakkiin ishee ka’ee arge. Yeruma sana fakkii sana bocee kaa’uun dulloomee du’uuf gaafa ga’u ijoollee isaatiin “samiirratti mallattoo urjii fakkii kana fakkaatu yoo agartan yeroo sana uumaan biyya lafaa ni dhalata waan ta’eef kennaa kana geessaa laadhaafi” jedhee ajajee ture (Andimtaa mat. 2:1-14). Ogeessonni sadan kunis yeroo booda mallattoo urjii kanaa gaafa argan warqee, Ixaanaafi karbee fudhatanii deemsa isaanii jalqabani. Waggaa lama boodas urjiin sun isaan dursaa, isaanis “mootiin biyya lafaa eessatti dhalate?” jechaa gaafachaa dhufanii Beeteliheem gahanii Gooftaa haadha Isaa Maariyaamii waliin arguun Baay’ee gammadanii erga sagadaniif booda kennaa harka fuudhii dhiyeessaniif.
Raajiin “Moototni Tarseesiifi cittuuwwan lafaa kennaa siif dhiheessuu; moototni Saabaafi Arabaas kennaa harka-fuudhii sii kennu”(Faar. 71:10) jedhus haaluma kanaan raawwate.
Kennaaleen isaan Gooftaaf dhiyeessan iccitii maalii qabu?(Andi.mat 2:1-14)
Warqee: warqeen qulqulluudha; Atis Waaqa qulqulluudha, akkeenya qulqullummaa qabda, akkuma warqeen qulqulluu ta’e warreen sitti amanan hunduu hojiifi amantiin qulqulloota ni ta’u jechuufi dha.
Ixaana: Ixaanni ni urgaa’a, fooliin isaas namatti tola. Suraafeel xinaa isaaniin teessoo kee ni aarsu, Atis urgooftuu qulqullootaa dha, luboonni yeroo hundaa kadhaa ittiin siif dhiyeessu jechuu isaaniti. Ixaanni urgooftuu akkuma ta’e Atis akkeenyaan urgaa’aadha, warren sitti amanan hunduu urgooftota hojii gaariihojjetan jechuudhaafi.
Karbee : karbeen wanta cabe lama kan deebisee walitti hidhu dha; Atis Addaam kan garee ergamootaa irraa foxxoqee bahee ture ergamoota faana tokko taasista jechuu isaaniiti. Karaa biraaniis yeroo booda yihuudonni hadhooftuu si obaasu, karbee siif dhiyeessu jechuu isaaniiti.
Dhalachuu Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos keessatti kanneen nama ajaa’ibsiisan keessaa muraasa:
Waaqayyo akkeenyaan abidda ta’e nama ta’ee qaama namaan tuqamuu Isaa.
Dubroon Maariyaam dubrummaan ulfooftee dubrummaan gooftaa dahuushee.
Kiruubeel teessoo Isaa baatanii sodaafi hollannaan kan galateeffatan warreen tuffataman (tiksitoota horiin) galateeffatamuusaa.
Gooftaan Tsirha-aariyaam (samii) keessa jiraatu dallaa horii keessatti dhalachuu Isaa.
Qaamni Isaa abidda, huccuun Isaa abidda ta’e gooftaan yommuu dhalatetti qorraan dhaamotee ho’a afuura horii fedhuu Isaa.
Namootni ogeessonni biyya fagoofi daandii hin beekne keessa deemanii mallattoo urjiidhaan dursamaa Beeteliheem dhufuun Isaaf sagaduun isaanii dinqii dha.
Egaa walumaa galatti dhaloota gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin addunyaan dukkana keessa ture ifa argateera; seexanni hedduu rifateera; namniif ergamootni tokkummaan Waaqayyoof galata dhiyeessaniiru; samiirratti kiruubeel teessoo Isaa kan baatan dallaa horii keessatti Yoseef, Seloomeen, tiksitoonni, sawwaniifi harreen akka kiruubeel teessoo isaa fuulduratti tajaajilaniiru; Waaqni samiifi lafti hin dandeenye dallaa horii keessatti waan dhalateef namoonni, Ergamoonnifi horiin tokkummaan galateeffataniiru. Nutis hundi keenya guyyaa fayyinaa kana yaadachaa Waaqayyoon galateeffachuu qabna.
Dhalatee kan nu fayyise Waaqayyoof galatni haa ta’u; Ameen!
v Madda : Andimtaa Macaafa Maatiwoos 2:1-14
፡ Hamerii bara 2008 muddee barreeffame.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2017-01-13 06:44:322018-10-26 09:21:03Dhaloota Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos
Sooma Raajotaa Ayyaana Cuuphaa; Kitaaba ‘Sinkisaaraa’ keessatti